U-Aveiro ePortugal: umuzwa wokuba seVenice encane | Ukuhamba kwe-Absolut
Lapho uvakashela i-Aveiro ePortugal awukwazi ukugwema umuzwa wokuba ngaphakathi iVenice encane. Iwele iziteshi ezintathu kuze kube muva nje zisetshenziselwe ukuthutha izimila zasolwandle nosawoti, nakho kunesithakazelo ubuciko bezakhiwo zobuciko nezikhumbuzo ezahlukahlukene zenkolo. Njengokungathi lokho bekunganele, futhi ikunikeza ukugqwayiza kwedolobha laseyunivesithi, amabhishi amahle kakhulu nokunethezeka kwedolobha elincane.
I-Aveiro ingamakhilomitha ayisikhombisa kuphela ukusuka Porto kanti isitimela esiqondile siphethe ukuxhumana ngezindawo zombili. Lokhu kwenza izivakashi eziningi zasePorto zithuthelekele e-Aveiro ku ukuhamba kosuku. Kunoma ikuphi, zonke izimfanelo zaleli dolobha elincane zikwenze kwaba enye yezindawo eziyizintandokazi emhlabeni. enyakatho yePortugal. Uma ufuna ukumazi, sikukhuthaza ukuba usilandele lapho sivakashile.
1 Izikhumbuzo ze-Aveiro ePortugal
1.1 I-Republic Square
1.2 Aveiro Cathedral
1.3 Ifektri yakudala yobumba iJerónimo Pereyra Campos
1.4 Isigodlo sikaJesu noMnyuziyamu wase-Aveiro
1.5 Umnyuziyamu We-Living Science Factory
1.6 I-Ecomuseum yaseMarinha da Troncalhada
1.7 IVista Alegre Museum
1.8 Isiteshi sesitimela
1.9 Indlu yesibani se-Aveiro
1.10 UJardim do Rossio
1.11 I-Infante Dom Pedro Park
2 Imisebenzi okufanele yenziwe e-Aveiro
3 I-Gastronomy yase-Aveiro ePortugal
4 Isimo sezulu sika-Aveiro
5 Ungafika kanjani e-Aveiro ePortugal
6 Olunye ulwazi olunentshisekelo mayelana ne-Aveiro ePortugal
Izikhumbuzo ze-Aveiro ePortugal
I-nucleus yokuqala ye-Aveiro yindawo yakhona Beira Mar, nemigwaqo yaso emincane nemisele yayo eyenziwe ngo izindlu zobuciko ngeziteleka ezingaphambili, ezihlotshiswe kakhulu. Zakhiwa ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX ngabafuduki abangamaPhuthukezi ababuya ngemuva kokwenza inzuzo yabo eBrazil. Kepha i-Aveiro inezinye izikhumbuzo okufanele ikukhombise zona.
Kuyisikhungo sezinzwa sesikhungo esinomlando sase-Aveiro. Kuyisikhala esikhulu sasemadolobheni esinendawo ebukekayo nalapho ungabona khona i- isakhiwo sehholo ledolobha kanye neChurch of Mercy, esizokhuluma ngayo nawe kungekudala. Kulesi sikwele uzothola nesithombe sombusazwe wasePutukezi UJose Estevao, owazalelwa kulo muzi.
Ubuciko bokwakhiwa kobuciko
Futhi kubizwa Isonto laseSao Domingos de Aveiro, yakhiwa ngekhulu leshumi nane. Kodwa-ke, ngaphandle kwalapho kusala udonga olulodwa kuphela, konke okunye kungenxa yokwakhiwa kabusha okwenziwe ngekhulu le-XNUMX. Esikhundleni salokho, ngaphakathi kwethempeli ungabona abadumile i-gothic cruzeiro yaseSao Domingos, okuyingxenye yesakhiwo sokuqala. Futhi ngaphakathi kwayo kukhona i-modernist presbytery, i-baroque choir, amanye ama-chapel asesistist kanye nohlaka lombhobho olubukekayo.
Ngaphandle kokuphazamisa leli thempeli, sithola ISonto Lomusa, isonto elincane lekhulu le-XNUMX leminyaka elinompheme omuhle weMannerist ohlotshiswe ngamathayili. Ingaphakathi, elinamathayili amaningi, okuqoshwe nemidwebo, nakho kufanele ukuvakashelwa.
Ifektri yakudala yobumba iJerónimo Pereyra Campos
Lesi sampula esibalulekile sokwakhiwa kwezimboni ngesinye sezikhumbuzo ezibaluleke kakhulu zase-Aveiro ePortugal. Her ubumba olungaphambili lobumba olubomvu futhi njengamanje isetshenziswa njengesikhungo sengqungquthela nendawo yokubonisa.
Isigodlo sikaJesu noMnyuziyamu wase-Aveiro
I-conventual enclosed isakhiwo esihle kakhulu sekhulu le-XNUMX lapho izinto zeBaroque zanezelwa khona kamuva. Kuhlala ithuna lika Jehova inkosazana uSanta Joana, indodakazi yeNkosi u-Alfonso V wasePortugal. Kepha ngaphezu kwakho konke yindlunkulu ye- I-Aveiro Museum, lapho ungabona khona imisebenzi eminingi yobuciko kusukela ngekhulu le-XNUMX kuya kwele-XNUMX leminyaka, kanye nemibhalo yesandla yomlando nezinsalela zemivubukulo ezisendaweni.
Ifektri kaJerónimo Pereyra Ceramic
Umnyuziyamu We-Living Science Factory
Ilungele wena ukuvakashela nezingane zakho, inamagumbi ayishumi nambili asebenzelana anikezelwe ngokulandelana ku- i-robotics, lo i-biochemistry neminye imikhakha yesayensi. Ibuye ikunikeze eziningana imibukiso ehlala njalo inohlonze impela.
I-Ecomuseum yaseMarinha da Troncalhada
Uma ufuna ukwazi ukuthi basebenze kanjani ku- amafulethi kasawoti e-Aveiro ePortugalUngavakashela leli sayithi elitholakala kwenye yazo esasebenza namanje. Iphinde isebenze njengendlela yokugcina lesi siyalo sasendulo sokukhipha esenziwe kusukela ku-959.
IVista Alegre Museum
La I-Vista Alegre porcelain Ibilokhu ikhiqizwa kusukela ngo-1824 futhi ingenye yezidume kakhulu emhlabeni, namakhasimende anjengeNdlovukazi yaseNgilandi. Eduze kakhulu ne-Aveiro unayo le Museum lapho ungabona khona ezinye zezingcezu zayo ezinhle kakhulu.
Uma ufika e-Aveiro ePortugal ngesitimela, ukumangala kokuqala ozoba nakho edolobheni yilo kanye olungaphambili lwesiteshi. Ngoba imbozwe enkulu tile polychrome eziphinda zenze izigcawu ezijwayelekile zesifunda. Isibonelo, umsebenzi wabadobi, amaflethi kasawoti noma isiteshi esiphakathi se-Aveiro.
Indlu yesibani se-Aveiro
Kutholakala olwandle lwaseBarra, esizokhuluma ngalo ngokuhamba kwesikhathi, luzodonsa ukunaka kwakho ngenxa yokuphakama kwalo. Eqinisweni, kunjalo eliphakeme kakhulu ePortugal futhi eyesibili ephakeme kakhulu kuyo yonke iNhlonhlo Yase-Iberia. Isebenze kusukela ngo-1893 futhi ukukhanya kwayo kunebanga lamamayela angama-23 nautical.
UJardim do Rossio
Kutholakala onqenqemeni lomfula i-Aveiro, kuyipaki ekahle yokuphumula ngemuva kokuhambela idolobha. Kuyo ungabona izinhlobo ezahlukahlukene zezinhlobo zezitshalo nokubukwa okuhle kakhulu. Futhi, uma unenhlanhla kancane, ukuvakasha kwakho kuzoqondana nokukodwa kokuningi izimakethe zobuciko ebibanjelwe kuleli paki.
I-Infante Dom Pedro Park
Mhlawumbe muhle kakhulu kunangaphambili, unamachibi amaningi kuwo anamabhuloho okuhlobisa namanye amaningi amakhona ezothando. Ibuye ibe nendawo yokudlela kanye nethala, kanye namatafula namabhentshi okusetshenziselwa mahhala ukuba nokudla. Ungathatha futhi izingane zakho uye nazo IBaixa de Santo Antonio Park, lapho benendawo yezingane ngisho nepaki ye-skate.
Imisebenzi okufanele yenziwe e-Aveiro
Uma uvakashela i-Aveiro ePortugal, kukhona okumele ukwenze ngaphandle kombuzo ukujabulela idolobha. Imayelana nokulima ngemigudu yayo ezikebheni ezindala ezazinikezelwe ukuhambisa izimila zasolwandle nosawoti. Abakwa-Aveirenses bayababiza bongiwe futhi zibukeka zifana nezama-gondola eVenice, yize emakhulu.
Banamalungu amabili abasebenzi futhi, njengoba bekwazi ukuthwala abagibeli abenele, banamanani okonga cishe ama-euro ayisithupha. Uhambo luthatha imizuzu engama-45 futhi lumboza imigudu emithathu ye-Aveiro, ikunikeza ngomunye umbono wedolobha.
Ngakolunye uhlangothi, uma uvakashela i-Aveiro ehlobo, unentshisekelo yokwazi ukuthi inamabhishi amabili. Lokho kwe ICosta Nova ivelele ngokuhlukile kwayo amakhasino às riscas, isipikili izindlu ezinemishwe, kanye nezitebele zayo zokudla ezingomahamba nendlwana. Kubhekiswa ku- Ibhishi iBarra, lapho kutholakala khona i-lighthouse ebesikhuluma ngayo, izungezwe i-boulevard lapho unezindawo eziningi zokuphuzela nezindawo zokudlela.
Eduze nolokuqala lwala mabhishi kune- ISao Jacinto Dunes Nature Reserve. Kungamahektha angamakhulu ayisishiyagalolunye wemvelo lapho ungabona khona izinyoni zasolwandle ezihlukile, kanye nezindunduma uqobo, ezibabazekayo. Yindawo ephelele ongayenza ukuhamba ngezinyawo ngenkathi ubuka lezo zinhlobo. Phakathi kwemizila yayo, ikholi ligqamile UDescoberta da Naturaleza Trilho. Kodwa-ke, ukuvakashela lesi siqiwu semvelo kufanele usicele kusengaphambili.
Ekugcineni, uma ufuna ukuzwa ukushaya kweqiniso kuka-Aveiro, kufanele udlule kufayela le- IPlaza do Peixe. Emini, kunemakethe yezinhlanzi enabantu abaningi futhi, ebusuku, kuyindawo yokuhlushwa yabafundi yokuphuza iziphuzo zayo eziningi imigoqo nezindawo zokudlela. Futhi lokhu kusiletha ekudleni okujwayelekile kwedolobha lasePutukezi.
I-Gastronomy yase-Aveiro ePortugal
Yize kubonakala sengathi siqala izincomo zethu zokupheka ekugcineni, into ejwayelekile kakhulu e-Aveiro ngokuya nge-gastronomy yi-dessert. Imayelana namaswidi abawabizayo ama-ovos moles, ogama iresiphi ilula: isikhuphasha samaqanda, ushukela namanzi.
Ngokuqondene nezinhlanzi, kufanele uzame ikhodi, ejwayelekile kuyo yonke iPortugal, kepha lokho e-Aveiro kulungiswa ngezindlela eziyinkulungwane. Futhi i- i-ray ku-pitaú sauce, the molho oqoshiwe othosiwe, kwehlukile ama-caldeiradas, the isitshulu se-eel noma i ama-bass olwandle abiwe. Ngokuphathelene nenyama, i- iwundlu elithambile, elungiswa ezitsheni zobumba ezibizwa ngokuthi omnyama caçoilosfuthi i ingulube encelisayo.
Ukuze uphuze, kufanele uzame iwayini elidumile le- Ukuqokwa kweBairrada Yemvelaphi. Futhi, phakathi kophudingi, ngaphezu kwama-ovo moles, unokunye okuhle kakhulu amakhekhe kanye ne- isibindi, uhlobo lwama-crepes agcwele uju, ushokoledi noma ushizi ngisho.
Isimo sezulu sika-Aveiro
Idolobha lasePortugal linesimo sezulu omnene, ngezinga lokushisa elijwayelekile lonyaka cishe lama-degree ayishumi nanhlanu. Ubusika buba mnandi, bunobuncane obucishe bube mahlanu ngaphezu kuka-zero nezilinganiso ze- cishe eziyishumi. Kepha futhi yisikhathi semvula kakhulu, ikakhulukazi ngenyanga kaJanuwari.
Ngokwengxenye yalo, ihlobo lifudumele kepha alishisi. Ukushisa okuphakathi kulezi zinyanga kuseduze iziqu eziyishumi nesishiyagalolunye, ubuncane beshumi nanhlanu futhi ubuningi bungamashumi amabili nantathu. Inani elincane lemvula livela ngoJulayi.
Ngakho-ke, izikhathi ezinhle kakhulu zokuvakashela i-Aveiro ePortugal ziyintwasahlobo nehlobo. Ukuwa futhi kuyisikhathi esihle, kepha lina kakhulu. Futhi, uma ungakuthandi ukugxila kwabavakashi, kungcono ukuthi ukhethe intwasahlobo, ngoba ehlobo idolobha lithola izivakashi eziningi ezivela ngaphakathi nangaphandle kwePortugal.
Ungafika kanjani e-Aveiro ePortugal
I-aerodrome eseduzane nedolobha lasePortugal yilelo le- Porto. Uma usukhona, ungathatha ifayela le- i-metro, efinyelela enkabeni cishe emizuzwini engama-XNUMX, noma ngebhasi, yize eyokugcina ithatha isikhathi eside. Ngemuva kwalokho, kusukela esiteshini saseCampanha ePorto bayahamba izitimela eziqonde ngqo e-Aveiro, ohambo lwakhe oluthatha cishe ihora nekota. Ngokwengxenye yayo, isiteshi sedolobha lakamuva cishe imizuzu eyishumi nanhlanu ukusuka enkabeni.
Njengoba ukwazi ukubona, kungumzila lapho kufanele udlulise khona kaningana. Ngakho-ke, kungaba ngcono ukuthi uye e-Aveiro ngemoto yakho yangasese noma ngemoto eqashisayo. Ngaphezu kwalokho, ngale ndlela ungahambisa ngokukhululekile ezindaweni ezizungezile.
Uma ufika uvela empumalanga noma enyakatho, umgwaqo omkhulu okuyisa edolobheni yi A25, ngenkathi uhamba ukusuka eningizimu uzoyifaka nge A17. Kodwa-ke, uma sikhuluma ngokuthuthwa komgwaqo, unentshisekelo yokwazi ukuthi kukhona olayini bamabhasi afika ngqo e-Aveiro evela emadolobheni ahlukene aseSpain. Lokhu kunjalo ngeLa Coruña, iValladolid noma iBilbao.
Isiteshi sesitimela i-Aveiro
Ngakolunye uhlangothi, idolobha lasePutukezi lincane. Ngenxa yalokho, ungayihlola ngezinyawo. Kodwa-ke, futhi unensizakalo yamahhala kamasipala ye- imali mboleko yebhayisikili, odume ngelika izimbungulu. I-Aveiro iyisicaba ngakho-ke ngeke kuthathe umzamo omkhulu ukuthi uyihambise.
Olunye ulwazi olunentshisekelo mayelana ne-Aveiro ePortugal
Idolobha lasePortugal ligubha imikhosi emibili unyaka wonke. NgoJanuwari i- idili likaSan Gonzalito, okhokha intela kumatilosi. Futhi ngoJulayi, i- umkhosi womfula, enemisebenzi eminingi efana nemijaho yama-moliceiros nemidanso yesifunda.
Ngakolunye uhlangothi, uma uhambela e-Aveiro ngemoto yakho, unesifiso sokwazi ukuthi umgwaqo u-A25, okuyisa edolobheni, inkokhelo. EPortugal, lezi zingakhokhwa kuphela ngekhadi lesikweletu. Kepha ungathenga futhi i- ikhadi elikhokhelwa ngaphambili ukuthi bathengisa eziteshini eziningi zegesi. Uma kukhulunywa ngokupaka edolobheni lasePutukezi, ngeke ube nankinga ngaphandle kwesikhungo, lapho kulawulwa khona. Ngakolunye uhlangothi lwesiziba somfula kodwa futhi eduze kwesikhungo esinomlando uneziningana ukupaka mahhala.
Ngokuqondene nokubuyiselwa, kufanele uqaphele izipikisi ozibekayo ngaphambi kokudla. Uma ungazizami, akwenzeki lutho. Kepha uma wenza kanjalo, wena bazokhokhisa ngokuhlukana lentengo yokudla. Uma, njengenjwayelo, kuyibhotela noma iminqumo, kushibhile. Kepha, uma kunalokho kungu-ham, kuzobe sekuvele kubiza kakhulu.
Ekugcineni, amaPutukezi akuqonda ngokugcwele Isi-Castilian ngakho-ke ngeke ube nenkinga yokuziqonda. Kodwa-ke, sisho amanye amagama onentshisekelo ukuwazi, ikakhulukazi lapho u-oda endaweni yobha. Babiza ikhofi ngokujwayelekile bica, kepha uma isikiwe kufanele ucele i ehlutshiwe. Ngokwengxenye yalo, ikhofi elinobisi ubisi lwezinyosi. Futhi, uma ufuna ingilazi yobisi ngethonsi lekhofi, cela i- i-galao.
Ekuphetheni, Aveiro ePortugal Kuyinto idolobha elihle elibiza ukuvakashelwa. Ikunikeza izikhumbuzo ezinhle, amabhishi amahle, isimo sezulu esimnandi nokudla okumnandi. Kepha ngaphezu kwakho konke, kukunika umuzwa wokuba seVenice encane.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Aveiro ePortugal
Yini ongayibona oGwini lwe-Amalfi